सीमा वार्ता नमिलेपछि चीनले भन्योः भारतले नाजायज माग गरिरहेको छ - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०७८, सोमबार २ : ०७
दिल्ली। चीन र भारतबीच सीमाको विषयमा भएको वार्ता बिना निस्कर्ष टुंगिएको छ। लद्दाखमा जारी तनाब अन्त्य गर्ने विषयमा दुई देशका सैन्य कमान्डरहरूबीच १३ औंच चरणको वार्ता बिना निस्कर्ष टुंगिएको हो।
वार्ता बिफल भएसँगै दुबै देश आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। लद्दाखलाई लिएर दुई देश पछिल्लो १७ महिनादेखि तनाबमा छन्। सीमामा दुबै देशका सेना आमने–सामने अवस्थामा छन्।
चीनले सीमा क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि तीब्र पारेको भारतीय पक्षको आरोप छ, तर, भारतीय आरोपलाई चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ। वार्तामा आफूले दिएको रचनात्मक सुझाबलाई चीनले बेवास्ता गरेको भारतको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
भारतले वार्तामा विवादित क्षेत्र हट स्प्रिङ, देपसाङ र चार्डिंग नुल्लाह जक्सनबाट चिनियाँ सेनाहरु फर्किनुपर्ने बताएको थियो। वार्ताका क्रममा चीनले कुनै राम्रो प्रस्ताव ल्याउन नसकेको पनि भारतले आरोप लगाएको छ।
🇨🇳Spox. Colonel Long Shaohua of Chinese #PLA Western Theater Command: #India still insisted on the unreasonable and unrealistic demands at the 13th round of the corps commander-level talks held on Sunday October 10th, which made the negotiations more difficult. pic.twitter.com/OYGGgbqTrO
— Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) October 10, 2021
तर, ती सबै आरोपहरु चीनले अस्वीकार गरेको छ। ‘भारतको अस्वभाविक र जटिल मागका कारण वार्तामा समस्या आएको हो, ’ चिनियाँ पक्षले भनेको छ। करिब दुई महिनाको अन्तरालपछि दुबै देशका कमान्डरहरू चिनियाँ भूमि मोल्डोमा वार्तामा बसेका थिए।
सिमानामा दुबै देशका सेनाले दशौं हजार सेना परिचालन गर्नुका साथै अत्याधुनिक हतियार, ट्यांक, लडाकु विमान, आर्टिलरी तैनाथ गरेका छन्। एजेन्सी